ကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်း DeltaFosB, FosB နှင့် cFos တို့၏အစဉ်အလာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
J ကို Neurochem ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC အောက်တိုဘာ 1, 2011 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို Neurochem ။ အောက်တိုဘာ 2010; 115 (1): 112-122 ။
သြဂုတ် 3, 2010 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2010.06907.x
Erin ခ Larson,* Fatih Akkentli,* Scott Edwards က, ဒန်ယဲလ်အယ်လ်ဂရေဟမ်, ဒိုင်ယာနာအယ်လ် Simmons, Imran N. Alibhai, အဲရစ်ဂျေ Nestler,1 နှင့် ဒါဝိဒ်သည်ဒဗလျူကိုယ်ပိုင်
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် J ကို Neurochem
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအခြေခံမှထင်ကြသည်ဗီဇစကားရပ် profile များကိုမြားတှငျပွောငျးလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လက်ခံ. ကြွက်များတွင်နာတာရှည်သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေးစဉ်နှင့်အပြီး striatal ငျဒသေ၌, ကူးယူအချက်များ၏ Fos-မိသားစု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အထူးသ cFos, FosB နှင့်ΔFosBဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ caudate-putamen (CPU) တွင်ΔFosBတိုးကျန်ရစ်နေချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့သည်နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ΔFosBပရိုတိန်း၏ သာ. ကြီးမြတ်စုဆောင်းခြင်းနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် (NAc) shell ကိုနှင့်အဓိကအတူ cFos, FosB နှင့်ΔFosBပြပွဲဒေသတွင်းနှင့်ယာယီကွဲပြားစကားရပ်ပုံစံများကိုတွေ့ရှိခဲ့ စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဆင်တူ။ ဆနျ့ကငျြ, သည်းခံစိတ်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအားလုံး3striatal ငျဒသေအတွက်ΔFosBအဘို့ကိုကင်း-သွေးဆောင် mRNA ဖို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သည်းခံစိတ်လည်းအများဆုံးအထူးသ NAc shell ကိုနှင့် CPU ထဲမှာ FosB စကားရပ်မှတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ FosB နှင့်ΔFosB၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ထမ်းဘိုးကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အလားတူခဲ့သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကင်း-သွေးဆောင် cFos သော induction မှသည်းခံစိတ်, striatal ဒေသများ dorsal ventral ပေမယ့်မကင်းစားသုံးမှု၏ကုသိုလ်ကံထိန်းချုပ်မှုအပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် CPU အတွက်ΔFosB-mediated neuroadaptations ယခင်ကကွောထိုးသှငျးသောကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏စတင်နှင့်အတူထင်နှင့်, အတူတကွ NAc အတွက်ΔFosBပိုမိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်စွဲ-related တိုးဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ထက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ
keywords: ကိုကင်း, Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ရုပ်သိမ်းရေး, striatum, Fos
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့ compulsive မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှတဏှာနှင့် relapse များ၏ဇွဲနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမှထင်ဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် neuroadaptations ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအ neuroadaptations အတော်များများဟာ (အာရုံခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအပေါ်အလားအလာကြာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်ထားတဲ့ကူးယူအချက်များနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏နောက်ဆက်တွဲစည်းမျဉ်း၏ induction ကနေဖြစ်ပေါ်Zhang က et al ။ 2006) ။ ကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်နှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် striatal ဒေသများ၌ဤမိသားစုပြပွဲ differential ကို induction ပုံစံများအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်, အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းတဲ့ passive, Non-ဆက်ပြောပါတယ်ဖက်ရှင် (ဆိုလိုသည်မှာ intraperitoneal အားဖြင့် (IP) ဆေးထိုး) တွင် acute အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါက dorsal (caudate-putamen, CPU) နှင့် ventral (နျူကလိယ accumbens, NAc) နှစ်ဦးစလုံးအတွက် cFos နှင့် FosB mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်တိုးပွားစေ striatum (Graybiel et al ။ 1990; Young က et al ။ 1991; မျှော်လင့်ချက် et al ။ 1992), ဒီတုန့်ပြန်မှသည်းခံစိတ်နာတာရှည် passive အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် (မျှော်လင့်ချက် et al ။ 1992, 1994; Alibhai et al ။ 2007). ΔFosB၏ဆနျ့ကငျြ, striatal အဆင့်ဆင့် (35-37 KDA), အများ၏တည်ငြိမ်ခြင်းကို splice မူကွဲ fosB မျိုးဗီဇ, နာတာရှည်ပေမယ့်စူးရှမဟုတ် passive ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ခြီးမွှောကျနေကြတယ် (မျှော်လင့်ချက် et al ။ 1994; Nye et al ။ 1995; Chen က et al ။ 1995, 1997) ။ ဤရွေ့ကားတည်ငြိမ်ΔFosB isoforms (cFos သို့မဟုတ် FosB ဖြစ်စေထက်ကွဲပြားခြားနားသောဇွန်မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်အတူ heterodimerize နိုင်ပါတယ်Chen က et al ။ 1995), နှင့်လည်း (သူ့ဟာသူနှင့်အတူ Jorissen အလုပ်လုပ်တဲ့ homodimers ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ် et al ။ နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် Active ပရိုတိန်း-1997 (AP-1) ရှုပ်ထွေးသော၏ differential ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းစူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ဗီဇစကားရပ် (ထံမှကွဲပြားသောလမ်းအတွက် AP-1 က်ဘ်ဆိုက်များမှာဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း 1),မြော်လင့်ခြင်း, 1998; Kelz နှင့် Nestler, 2000) ။ မျိုးဗီဇစကားရပ် profile များကိုများတွင် differential အပြောင်းအလဲများကိုလည်းΔFosBမြင့်တက်ရေတိုရေရှည်သို့မဟုတ်ရှည်တည်မြဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤပြောင်းလဲကင်း-mediated အပြုအမူတွေ၏စကားရပ် differential ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိပေါ် မူတည်. ဖြစ်ပွား (McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ စိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်, Δအပါအဝင်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု9-THC, နီကိုတင်း, အီသနောနှင့် phencyclidine လည်း (striatal ဒေသများတွင်တည်ငြိမ်ΔFosB isoforms ၏စုဆောင်းခြင်းမှဦးဆောင်McClung et al ။ 2004; Perrotti et al ။ 2008) ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက် (နာတာရှည်လှုံ့ဆော်ထိတွေ့ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့ cFos သော induction မှသည်းခံဘို့အကောင့်စေခြင်းငှါΔFosBစုဆောင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် cFos အကြားတစ်ဦးကအနုတ်အပြန်အလှန်အကြံပြုRenthal et al ။ 2008). အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်တည်ငြိမ်ΔFosB isoformsa"ကိုမော်လီကျူး switch ကို" ကဲ့သို့ပြုမူနှင့်ပိုပြီးစွဲဇီဝပြည်နယ်များမှကနဦးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆမှဦးဆောင်ကြပါပြီ (Nestler et al ။ 2001; Nestler, 2008).
အများဆုံးယခင်လေ့လာမှုများ Fos မိသားစုပရိုတိန်း၏စကားရပ်လေ့လာဖို့ထပ်ခါတလဲလဲ passive ကင်းကုသအသုံးပြုသွားမည်နှင့်ကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွေးကြောသွင်း (IV) လူ့အလွဲသုံးစားမှုပုံစံများပုံမှန်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့ဖြစ်၏တဲ့အခါမှာဒီစည်းမျဉ်း၏အတော်လေးအနည်းငယ်ဥပမာရှိပါတယ်နေစဉ်။ လေ့လာမှုတစ်ခု (Sub-နာတာရှည်ဖြစ်စေပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများကိုကြွက်၏ CPU မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြစဉ် cFos mRNA, ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုတည်း 30-မိ session တစ်ခု (Kuzmin နှင့် Johansson, 1999) ပြီးနောက် CPU အတွက်ခြီးမွှောကျကြောင်းတွေ့ရှိရ3ရက်ပေါင်း) သို့မဟုတ်နာတာရှည် (6-12 ရက်သတ္တပတ်) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (Daunais et al ။ 1993, 1995) ။ ဆုတ်ခွာတဲ့ကာလပြီးနောက်, NAc အတွက် cFos ပရိုတိန်းအတွက်ကင်း-mediated တိုးကြိုတင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှု (နဲ့အတူကြွက်များတွင်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ဗင်္ရက်ရှာဟာ et al ။ 2004), မြင့်မားသော cFos အဆင့်ဆင့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုထိတွေ့ပြီးနောက် striatum တစ်လျှောက်လုံးကိုတွေ့နေစဉ် (Neisewander et al ။ 2000; Kufahl et al ။ 2009) ။ cFos မတူဘဲ, (ΔFosB၏ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းနာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် striatum တစ်လျှောက်လုံးမှာပြပြီ, ဤစုဆောင်းခြင်းဆုတ်ခွာသို့ကအနည်းဆုံး 1 နေ့အဘို့ဆက်လက်ရှိနိုငျပါတိုးလာPich et al ။ 1997; Perotti et al ။ 2008) ။ သို့သော်စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ဖြစ်စေထိတွေ့မှုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှမျိုးစုံ Fos မိသားစုပရိုတိန်း၏တုန့်ပြန်ပြောင်းလဲမှုများနှိုင်းယှဉ်မအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ ΔFosBနှင့် cFos အကြားအလားအလာ interaction က, မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ် differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန် differential ကို AP-1 ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်းရေးများ၏စွမ်းရည်များနှင့်ကင်း-mediated အပြုအမူပေါ်ဤအကြောင်းကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသောကြောင့်အတွင်းကိုပြောင်းလဲကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်လည်းအရေးကြီးပါသည် Non-ဆက်ပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးလည်းကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဆန္ဒအလျောက်အခါတွေ့ရှိရနေကြပြီး, ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးရပ်စဲပြီးနောက်ထိုအပြောင်းလဲဆက်လက်ရှိစခွေငျးငှါအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဆုံးဖြတ်ရန်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သော cFos, FosB နှင့်ΔFosB၏စကားရပ်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ΔFosB, FosB နှင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်း striatal ငျဒသေအတွက် cFos ၏စကားရပ်အပေါ်နာတာရှည် IV ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျနော်တို့စူးရှသို့မဟုတ်နာတာရှည်ဖြစ်စေထိတွေ့ပြီးနောက် Non-ကုသိုလ်ကံ လက်ခံ. တာဟာတဆင့်တစ်ဦးတူညီပမာဏနှင့်ကိုကင်းများ၏ယာယီပုံစံကိုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စည်းမျဉ်းနှင့်အတူကုသိုလ်ကံ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွေ့ရှိရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ FosB နှင့်ΔFosBအတူတူပင်၏ splice မျိုးကွဲဖြစ်ကြောင်းပေးထား fosB မျိုးဗီဇ, ငါတို့သည်လည်းပရိုတိန်းအဆင့်မှာစည်းမျဉ်းနှင့်အတူ FosB နှင့်ΔFosBများအတွက် mRNAs ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကနဦးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 250-300 ဂရမ်အလေးချိန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague-Dawley ကြွက် (12 AM7မှာပေါ်ထွန်း) တစ်ဦး 00 ဇအလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ် temperature- နှင့်စိုထိုင်းဆ-controlled ပတ်ဝန်းကျင်၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များအစားအစာနှင့်ရေတိုက်ကျွေးခဲ့ကြ ကြော်ငြာ libitum သူတို့ sucrose လုံးလေးများ (85 မီလီဂရမ်, BioServ) အတွက်လီဗာ-စာနယ်ဇင်းသင်တန်းပေးခြင်းကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့အခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးအလေးချိန်၏ 45% မှာထိန်းသိမ်းထားသောချွင်းချက်နှင့်အတူခပ်သိမ်းသောကာလ။ တစ်ဦး fixed-အချိုး 100 (FR3) အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုအောက်မှာရှာမှီးစံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်သည်အထိလေ့ကျင့်ရေးလေဝင်လေထွက်အော်ပရေတာအခန်းများ (Med Associates မှ, ဂျော်ဂျီယာ, VT) တွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်လီဗာ-စာနယ်ဇင်း (1 ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများများအတွက် session တစ်ခုနှုန်း 1 လုံးလေးများ) ။ တိရစ္ဆာန်များထို့နောက်ကျွေးမွေးခဲ့သည် ကြော်ငြာ libitum အနည်းဆုံးအား 24 ဇကြိုတင်ခွဲစိတ်ကုသရန်အဘို့အ။ ခွဲစိတ်အဘို့, ကြွက်ပြွန်ယခင်ကထုတ်ဝေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (အဆိုအရဆိုဒီယမ် pentobarbital (0.04 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, အိုင်ပီ) မေ့ဆေးအောက်မှာလက်ျာ jugular သွေးကြောထဲသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည် indwelling, လက်ထောက်အသက်ရှူနှင့်နာတာရှည်မှ (50 / ကီလိုဂရမ်, အရေပြားအောက်ဆုံး mg) atropine ပေးခဲ့Edwards က et al ။ 2007a) ။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ကြွက်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ penicillin တစ်ဦးဆေးထိုး (200,000 IU သည် / ကီလိုဂရမ်, အသား) ပေးခဲ့နှင့်ပြွန် gentamycin ဆာလဖိတ် (0.2 မီလီဂရမ် / ml) ပါဝင်တဲ့ 20 ml ကို heparinized (0.33 IU သည် / ml) bacteriostatic ဆားနှင့်အတူနေ့စဉ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးကနျြးမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကိုလမ်းညွှန်ကို၎င်း, UT အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ (IACUC) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ခွဲစိတ်ရာမှ 1 wk ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ (မျိုးစုံကိုစမ်းသပ်အုပ်စုများ / ရုပ်သိမ်းရေးအချိန်သို့ခွဲခြားခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1A), နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအတွင်းအော်ပရေတာစမ်းသပ်အခန်းများမှပြန်လာသော (Edwards က et al ။ 2007b) ။ အဆိုပါတည်းကကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ကြွက်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့စရာမလိုဘဲသျောနှင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာနေ့စဉ်ကိုင်တွယ်တစ်ခုတည်းရှိကြ၏။ အဆိုပါကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (CSA) အုပ်စုတွင်ကြွက်ဆန္ဒအလျောက်ကိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်နေ့စဉ် 0.5 ဇအစည်းအဝေးများအတွက်အားဖြည့်တစ်ဦး fixed-အချိုး 50 (FR1) အချိန်ဇယားအောက်တွင် (1 / ကီလိုဂရမ် /4μlပြုတ်ရည် mg),6ရက်ပေါင်းကောက်ယူ / wk, 18 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတက်ကြွစွာလီဗာစာနယ်ဇင်းတက်ကြွစွာလီဗာအထက်တစ် cue အလင်း၏ illumination နှင့်ဆက်နွယ်သော 2.5 s ကိုကိုကင်းပြုတ်ရည်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားအလင်းကိုကင်းတာဟာစဉ်အတွင်းငွိမျးနှင့်တစ်ဦးအပိုဆောင်း 12.5 s ကိုအချိန်ကုန်ကာလအိမ်တော်ကိုအလင်းချွတ်ကျန်ရစ်သည့်အတွက်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်အဲဒီမှာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြုတ်ရည်များနှင့်အချိန်ကုန်ကာလအတွင်းတုံ့ပြန်လီဗာမှတ်တမ်းတင်ထားသော, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအကျိုးဆက်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းမလှုပ်မရှားလီဗာအခန်းပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ပေမယ့်ဒီလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်အကျိုးဆက်မပါဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနာတာရှည်ထမ်းဘိုးကိုထမ်း (CY) အုပ်စုတွင်ကြွက်များတက်ကြွစွာ Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်မှတွဲနှင့်ပမာဏနှင့်၎င်းတို့၏ Self-စီမံခန့်ခွဲမိတ်ဖက်ဖို့တူညီယာယီပုံစံများအတွက် passive ကင်းတာဟာလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအဘို့အ passive ကင်းတာဟာ၏တစ်ခုတည်း session ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါစူးရှသောထမ်းဘိုးကိုထမ်း (AY) အုပ်စုတွင်ကြွက်လည်း, ထိုနာတာရှည် CSA အုပ်စုတွင်ကြွက်မှတွဲပေမယ့် Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တိုင်အောင်အစားကင်း၏ passive ဆားတာဟာလက်ခံရရှိခဲ့သည် အချိန်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆားလုပ် SA အုပ်စုတစ်စုတည်းကကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာခွဲစိတ်မှု, စမ်းသပ်သို့မဟုတ်အခြားစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အလားအလာရှိသောအပြောင်းအလဲများသိရှိနိုင်ဖို့တစ်လျှောက်လုံး Self-စီမံခန့်ခွဲဆားခွင့်ရခဲ့သည်။ cFos အတွက်အပြောင်းအလဲ FosB, ဒါမှမဟုတ်ΔFosBစကားရပ်ကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် AY နှင့် CY အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ် CSA နှင့် CY အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စဉ်တွင်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ cFos ၏တုန့်ပြန်အတွက်အပြောင်းအလဲ FosB, ဒါမှမဟုတ်ΔFosBသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ခဲ့ အထူးသကိုကင်းများ၏ pharmacological သက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်သည့်ကြိုးနှင့်ဆက်စပ်သော။ အားလုံးလေ့လာမှုအုပ်စုများထံမှတစ်ရှူး cFos ၏ကင်း-သွေးဆောင်စည်းမျဉ်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့ချက်ချင်းအပြီးသတ်4ဇစမ်းသပ် session တစ်ခုအပြီးကောက်ယူခဲ့ FosB နှင့်ΔFosBနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုများ၏ဇွဲတစ်ရှူးစုဆောင်း 24 ဇသို့မဟုတ်3နှင့်အတူအချို့သောလေ့လာမှုအုပ်စုများအတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည် နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှု session တစ်ခုပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်။ quantitative အနောက်ပိုင်းချေနှင့် RT ကို-PCR လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ antibody ကို Cross-reactivity ကိုပတ်သက်အလားအလာပြဿနာများကိုကျော်လွှားနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်မယ်များအတွက် sensitivity ကိုတိုးတက်စေရန် striatal ငျဒသေ၏ခှဲစိတျအပေါ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
(က) ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာ (WD) regimen သရုပ်ဖော်ထားတဲ့အချိန်ဇယား။ အစိုင်အခဲလိုင်းများစုစုပေါင်းသွေးကြောသွင်းကင်းတာဟာ၏အုပ်ချုပ်မှု (0.5 / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည် mg) နာတာရှည်ကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲ (CSA) နှင့်နာတာရှည် လက်ခံ. (CY) တိရိစ္ဆာန်များညွှန်ပြ ...
ကြွက်ဦးခေါင်းဒေသ (5 kW, 1.5့Murimachi Kikai, တိုကျို, ဂျပန်) ရည်ရွယ်ခရိုဝေ့ဖ် irradiation ဖွငျ့ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ ဦးနှောက်ကိုလျင်မြန်စွာခွဲဖြာချမ်းတုန်, နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တစ်ရှူးလာကြတယ် (14 gauge) (NAc) shell ကို, NAc core ကို, နှင့် (CPU)-putamen caudate မှရရှိသောသြဒီနိတ်အပေါ်အခြေခံပြီး 1.5 မီလီမီတာ Coronal ချပ်မှရရှိသောကြ၏ Paxinos နှင့် Watson (1998အတွက်ရုပ်ပြ ပုံ 1B) ။ တစ်ရှူးနမူနာ protease နှင့် phosphatase inhibitors်lysis ကြားခံအတွက် Sonic အားဖြင့် homogenized ခဲ့ကြသည်။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထို့နောက်5မိဘို့အပြုတ်ရေခဲပေါ်မှာနေရာချစကာများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုဆုံးဖြတ်ရန်လောရီတို့က assayed ခဲ့ကြသည်။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထို့နောက် 20 μgနမူနာအတွက် aliquotted နှင့်အသုံးပြုမှုသည်အထိ -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။
(; Bio-Rad, Hercules,, CA TGS) တစ်ရှူးနမူနာ buffered Tris / Glycine / ဆိုဒီယမ် dodecyl sulfate ဆားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ electrophoresis အားဖြင့်ခွဲခြာများအတွက် 12% polyacrylamide gels ပေါ်သို့တင်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ခွဲခြာပြီးနောက်နမူနာ polyvinylidene ဖလိုရိုက်အမြှေးပါးမှ electrophoresis (250 ဇများအတွက် 18 MA) ကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် (PVDF; Amersham, Piscataway, NJ) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် 3% nonfat ခြောက်သွေ့တဲ့နို့ထဲမှာပိတ်ဆို့နှင့် 1 Tris / Tween ဆားဖြေရှင်းချက် (TTBS buffered ×; ဇီဝ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ -Rad, Hercules,, CA) နေ့ချင်းညချင်း။ အမြှေးပါးထို့နောက် 1 နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: 1000 မှာနေ့ချင်းညချင်းတစ်ဦး 3% နို့ / 1 × TTBS ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ (ကြင်နာစွာဒေါက်တာမိုက်ကယ် Iadarola, ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, Bethesda, MD များကထောက်ပံ့ပေး) မူလတန်း Fra antibody ကို၏4dilution C. အမြှေးပါးကိုဆေးကြောခဲ့ကြ° 1 × TTBS အတွက် (4 ကြိမ်, 15 တစ်ဦးချင်းစီ mIN) နှင့်တစ်ဦး 1်1 × TTBS နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး: အခန်းထဲမှာမှာ 25000 ဇများအတွက် horseradish peroxidase မှ conjugated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန်အလယ်တန်း antibody ကို (Bio-Rad, Hercules,, CA) ၏ 1 dilution အပူချိန်။ အမြှေးပါးကိုထပ်ဆေးကြောပြီးတော့ပီယပ်စူပါ Signal အနောက်အီရတ်တွင် (Thermo Fisher ကသိပ္ပံ Inc ကို, Rockf သို့မဟုတ် d, IL) Hyperfilm (ECL ပေါင်း; Amersham) ရက်နေ့တွင် chemiluminescent-mediated ထောက်လှမ်းသုံးပြီးတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ cFos, FosB နှင့်ΔFosBပရိုတိန်းခညျြအနှောများ၏ဒေသခံအတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 1C။ ကျနော်တို့ (ကနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူစုပြုံနဲ့စွဲအခြေခံသော neuroplasticity ထုတ်လုပ်ရန်ထင်နေကြတယ်ဤပုံစံများဖြစ်သကဲ့သို့, ဒီလေ့လာမှုမှာΔFosBသာ stably ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပုံစံများ (ဆိုလိုသည်မှာ 35-37 KDA) ဆနျးစစျရှေးခယျြခဲ့Nestler et al ။ 2001) ။ မြို့၏ပုံရိပ် (ဖရက်ဒရစ်, MD) ကိုကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ဖို့အကြွင်းမဲ့အာဏာ immunoreactivity assign ရန်အသုံးပြုခဲ့ကာကင်နာဇာတ်ကားများကိုရိုက်ကူးဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုယူအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထောက်လှမ်းပြီးနောက်, အမြှေးပါးကိုချွတ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်β-tubulin များအတွက် Re-ပျေါ (1: 200000, ဆဲလ် signal, Danvers, MA) ။ β-tubulin အဆင့်ဆင့် Fos-related ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်ပုံမှန်တစ်ခုတင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
quantitative RT ကို-PCR (qRT-PCR) ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါချက်ချင်း FosB နှင့်ΔFosB mRNA ၏အပြောင်းအလဲများနှင့် 24 ဇဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ (သတ္တဝါများကိုလျင်မြန်စွာယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းနှင့် NAc core ကို, NAc shell ကိုအားဖြင့် euthanized ခဲ့ကြသည်နှင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ CPU အထီးကျန်ခဲ့ကြဂရေဟမ် et al ။ 2007; Bachtell et al ။ 2008) ။ တစ် ဦး ချင်းနမူနာများကို RNA-STAT-60 (IsoTex Diagnostics Inc, Friendswood, TX) တွင်ချက်ချင်းတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အရ mRNA ကိုထုတ်ယူသည်အထိခြောက်သွေ့သောရေခဲတွင်အေးခဲစေသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် chloroform ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာတစ်ခုစီသို့ပေါင်းထည့်ပြီး centrifugation လုပ်ပြီးနောက် aqueous layer ကိုသီးခြားဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း mRNA linear acrylamide (Ambion, Austin, TX) ၏ရှေ့တော်၌ isopropanol နှင့်အတူ precipitated ခဲ့သည်။ နမူနာများကို centrifuged လုပ်ပြီးထုတ်ယူထားသော mRNA လုံးလေးများကို 70% ethanol ဖြင့်ဆေးကြောပြီး DEPC ရေတွင်ပြန်လည်တင်ပို့သည်။ စုစုပေါင်း mRNA သည် DNAase ကုသမှု (Ambion, Foster City, CA) နှင့် Superscript III (Invitrogen, Carlsbad, CA) ကိုအသုံးပြုပြီးကျပန်း hexamers ဖြင့် cDNA သို့ပြောင်းပြန်ကူးယူသည်။ primer ပာ FosB, ΔFosBများကိုချဲ့ထွင်ရန်အသုံးပြုများနှင့် glyceraldehyde-3-ဖော့စဖိတ် dehydrogenase (GAPDH) 5'-GTGAGAGATTTGCCAGGGTC-3 ခဲ့ကြသည် 'နှင့် 5'-AGAGAGAAGCCGTCAGGTTG-3' 5'-AGGCAGAGCTGGAGTCGGAGAT-3 'နှင့် 5'-GCCGAGGACTTGAACTTCACTCG-3 အသီးသီးနှင့် 5′-AGGTCGGTGTGAACGGATTTG-3 ′နှင့် 5′-TGTAGACCATGTAGTTGAGGTCA-3′ ။ သံသရာတံခါးခုံ (cT) ကို amplification curve ၏ဒုတိယအနကျအဓိပ်ပါယျကို သုံး၍ သုံးဆတုံ့ပြန်မှုများမှတွက်ချက်သည်။ GAPDH ကိုကင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းမချမှတ်သောကြောင့် FosB နှင့် osFosB cT တန်ဖိုးများသည် GAPDH cT တန်ဖိုးများ (ΔcT) သို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း (Applied Biosystems manual) ascT နည်းလမ်းဖြင့်ခေါက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွက်ချက်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်တစ်ခုချင်းစီကို ဦး နှောက်ဒေသနှင့်အချိန်အချက်အဘို့အကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုကနေ% ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်, နှင့်လေ့လာမှုအုပ်စုများ p <0.05 မှာသတ်မှတ်အရေးပါမှုအဆင့်နှင့်အတူ, ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏တလမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို Fishers LSD စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုပြီးနောက် post-hoc နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုကင်းစားသုံးမှုနှင့်ပရိုတိန်းအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်စပ်မှု linear ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒအလျောက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်း (ရက် 13-18) SA ၏တတိယရက်သတ္တပတ်များကကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတည်ငြိမ်ပုံစံများပြခွင့်ပြုခဲ့သော CSA အုပ်စုတွင်တိရိစ္ဆာန်များ။ SA ၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ကျော် CSA ကြွက်များနှင့်၎င်းတို့၏ CY မိတ်ဖက်အတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်နေ့စဉ်ကင်းစားသုံးမှု 46.9 (± 1.8) မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် / နေ့ (37-60 ကီလိုဂရမ် / နေ့ / MG အကွာအဝေး) ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့ရက်တွင်, အ0ဇဆုတ်ခွာ (WD) အုပ်စုတစ်စုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 44.5 (± 2.5) မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း (အကွာအဝေး 25.5-57.5 / ကီလိုဂရမ် mg) တွင် CSA ကြွက်များနှင့်ကိုကင်းတစ်ခုတူညီငွေပမာဏကိုသူတို့ CY အားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည် နှင့် AY မိတ်ဖက်။
စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် striatal ငျဒသေအတွက်ΔFosBပရိုတိန်း၏ differential စည်းမျဉ်း
ΔFosBပရိုတိန်း၏ differential စည်းမျဉ်းကိုချက်ချင်းသွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (4 ဇ WD) ၏0ဇအောက်ပါ striatal ငျဒသေတှငျတှေ့ခဲ့သညျ။ အဆိုပါ NAc shell ကိုများတွင်သာနာတာရှည်ကိုကင်း (တည်းကကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာ CSA အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် CY အုပ်စုများ (45-61%) ကိုထုတ်လုပ်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A, F4,60 = 4.22, p = 0.005) ။ အဆိုပါ NAc core ကိုခုနှစ်တွင်ΔFosB (41%) အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပါ (AY အုပ်စုတွင်စူးရှထိတွေ့ပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2B, F4,60 = 17.04, p <0.001) နှင့်ပင်ပိုကြီးတဲ့တိုး (89-95%) နာတာရှည်ကိုကင်းပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နာတာရှည်ကိုကာကိုလာအုပ်ချုပ်မှုနှင့်အတူ NAc တွင် osFosB ပိုမိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်မတူဘဲစီပီသည် acute စော့နှင့်နာတာရှည်ကိုကင်းအုပ်စုများတွင် 86FosB (၈၆-၁၀၂%) တွင်အလားတူတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2C, F4,78 = 19.09, p <0.001) ။ မည်သည့်သန္ဓေတည်ဒေသခွဲတွင် CSA နှင့် CY အုပ်စုများအကြား osFosB တိုးမြှင့်မှုကွဲပြားမှုရှိခဲ့ပါသနည်း၊ ကိုကိန်းသုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်၍ စည်းမျဉ်းသည်ကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းညွှန်ပြသည်။ နာဆာအခွံတွင်နာတာရှည်ကိုကင်းပြီးနောက် afterFosB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီကြာဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။F2,32 = 5.19, p = 0.02), NAc core ကို (F4,60 = 4.53, p = 0.02), နှင့် CPU (F2,34 = 12.13, p <0.001), ဒါပေမယ့်3wk ပြီးနောက်အခြေခံအဆင့်သို့ပြန်သွား၏။ ကိုကင်းအုပ်စုများကို Saline SA အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ osFosB တွင်အလားတူတိုးတက်မှုများတွေ့ရှိရသည်။ Saline SA နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် AY တိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အခွံတွင်သေးငယ်သောတိုးမှုသည်သိသာထင်ရှားသောအောင်မြင်မှု မှလွဲ၍၊ သို့သော် inFosB ၏ထိန်းချုပ်မှုသည်ကုသမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလေ့ကျင့်မှုတစ်လျှောက်လုံးမိမိကိုယ်ကိုဆားငန်သောတိရစ္ဆာန်များတွင် osFosB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခဲ့ပါ။ osFosB ၏စည်းမျဉ်းများသည်ကိုကင်းမှဖြစ်ခြင်းနှင့်ခွဲစိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ချက်ချင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် 24 ဇနှင့်3ရက်သတ္တပတ် WD မှာΔFosB၏စည်းမျဉ်း။ ΔFosB (35-37 KDA) ၏အဆင့်ဆင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူး homecage ထိန်းချုပ်မှု (ထိန်းချုပ်ရေး) မှယုတ်± SEM ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဆားကနေတစ်ရှူး ...
နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် FosB ပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှသည်းခံစိတ်
ΔFosB၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှမတူဘဲ, IV ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး4ဇမှတစ်ခုတည်းထိတွေ့မှုအားလုံး3striatal ငျဒသေအတွက် FosB ပရိုတိန်းအတွက်သိသိသာသာပိုကြီးတဲ့တိုးထုတ်လုပ်ပေမယ့်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒီတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသိသာသာသည်းခံစိတ်။ အဆိုပါ NAc shell ကိုခုနှစ်တွင် FosB ချက်ချင်း AY တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး 260 ဇပြီးနောက် (4%) တိုးလာပေမယ့်ဒီတိုးနှစ်ဦးစလုံး CY နှင့် CSA အုပ်စုများ (ထဲမှာနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် (142-146% မှ) လျှော့ချခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 3A, F4,77 = 23.16, p <0.001) ။ CY နှင့် CSA အုပ်စုများတွင်နာတာရှည်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် (FBB (၂၉၅%) တိုးပွားလာခြင်း AY တိရိစ္ဆာန်များ၏ CPu တွင်လည်းအလားတူတိုးတက်မှုများတွေ့ရှိရသည်)သင်္ဘောသဖန်း။ 3C, F4,69 = 13.362, p <0.001) ။ NAc ၏အဓိကတွင်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက AY တိရိစ္ဆာန်များတွင် FosB (164%) တွင်သိသိသာသာတိုးလာခြင်း၊ သို့သော်ဤတိုးတက်မှုများသည် CY နှင့် CSA အုပ်စုများတွင်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု (၁၀၉-၁၁ မှ ၁၂%) နောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုများထက်များနေဆဲဖြစ်သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3B, F4,57 = 20.23, p <0.001) ။ osFosB နှင့်တွေ့သည့်အတိုင်းနာတာရှည်ကိုကင်းပြီးနောက် FosB ၏စည်းမျဉ်းကိုကိုကာကိုလာစားသုံးမှုကိုစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်သည်။ သို့သော် osFosB နှင့်မတူဘဲ ၂၄ နာရီအကြာတွင် FosB ပရိုတိန်းတိုးပွားမှုသည် NAc shell နှင့် core နှစ်ခုလုံးတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျန် CPU များတွင်ကျန် (၃၈-၅၂%) ဆက်ရှိနေသည်။F2,32 = 3.590, p <0.05) ။ FosB အဆင့်ကိုဆားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သောတိရိစ္ဆာန်များတွင်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။
ချက်ချင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် 24 ဇနှင့်3ရက်သတ္တပတ် WD မှာ FosB ၏စည်းမျဉ်း။ FosB (46-50 KDA) ၏ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းကိုကြည့်ပါ (တည်းကကုသမှုမရှိဘူး homecage ထိန်းချုပ်မှုကနေယုတ်± SEM ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် ပုံ2အတိုကောက်များအတွက်ဒဏ္ဍာရီ) ...
နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်ΔFosBနှင့် FosB mRNA နှစ်ဦးစလုံးသော induction ၏ attenuation
သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေး4ဇမှ acute ထိတွေ့မှု (ထို NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB mRNA အလားတူတိုး (11-16 ခြံ) ကိုထုတ်လုပ်F3,19 = 15.82, p <0.001), NAc core ကို (F3,19 = 13.275, p <0.001, နှင့် CPu ကို (F3,11 = 5.78, p ဆားလုပ် SA ထိန်းချုပ်မှု (0.03 ဇ WD, နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ = 0) သင်္ဘောသဖန်း။ 4A) ။ သို့သော်ဤတုံ့ပြန်မှုပြင်းထန်စွာ NAc shell ကို (3-4 ခြံ), NAc core ကို (4 ခြံ), နှင့် CPU (3 ခြံ) မှာနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် CY နှင့် CSA အုပ်စုများအတွက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ စူးရှသော IV ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးΔFosBမှ FosB ပရိုတိန်းဆွေမျိုးအတွက်ပိုကြီးတဲ့တိုးထုတ်လုပ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းစူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအားလုံး4striatal ငျဒသေ (ထဲမှာΔFosB (9-11 ခွံ) အတွက်ထက် FosB (16-3 ခွံ) အတွက် mRNA အတွက်အတော်လေးနိမ့်တိုးသွေးဆောင်သင်္ဘောသဖန်း။ 4B) ။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှုနီးပါး (ထို NAc shell ကိုအတွက်နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်F3,19 = 26.22, p <0.001) နှင့် CPu ကို (F3,11 = 4.24, p <0.05), သို့သော်သေးငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာတိုး (2 ခြံ) သည် NAc core ကိုအတွက် CY နှင့် CSA အုပ်စုများအတွက်ကျန်ရစ်ပေမယ့် (F3,19 = 11.10, p <0.001) ။ ဒီတူညီတဲ့ဆား SA ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် AY တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ΔFosBနှင့် FosB နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ကိုကင်း - သွေးဆောင်တိုး 24 နာရီ WD ပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားမခံခဲ့ရပါ။ 0h WD အချိန်အမှတ်မှာ FosB နှင့် osFosB mRNA အဆင့်ဆင့်၏အချိုး၏နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသိသိသာသာ NAc shell ကိုအတွက် osFosB mRNA မှ FosB ၏ဆွေမျိုးပမာဏကိုလျှော့ချကြောင်းပြသခဲ့သည် (F3,19 = 4.79, p = 0.02), NAc core ကို (F3,19 = 4.49, p = 0.02), နှင့် CPU (F3,11 = 5.59, p နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြောင့်ΔFosB isoform ပိုမိုဖွဲ့စည်းရေးရန်နှင့်မသက်ဆိုင်သိသိသာသာသည်းခံစိတ်နှစ်ခုစလုံး mRNAs အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှုမှ = 0.03) (သင်္ဘောသဖန်း။ 4C) ။ အဲဒီမှာကိုကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သို့မဟုတ်ထမ်းဘိုးကိုပြုတ်ရည်များကလတ်တလောတွင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ရှိမရှိ, ဤအချိုးမသိသိသာသာခြားနားချက်ကြီးနှင့် FosB ၏ဆွေမျိုးအချိုး: ΔFosB (Data မှမပြ) ကို 24h WD အချိန်အချက်အားဖြင့်သုံးခုစလုံးဟာဦးနှောက်ဒေသများတွင်ပုံမှန်ထက်မှပြန်လာသောခဲ့သည်။
ချက်ချင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် 24 ဇ WD မှာ FosB နှင့်ΔFosBများအတွက် mRNA ၏စည်းမျဉ်း။ ΔFosB (က) အတွက်မှတ်တမ်း၏ quantitative RT ကို-PCR, FosB (ခ) နှင့်အချိုး FosB / ΔFosBမှတ်တမ်း (C) ယုတ်±အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် ...
အဆိုပါ NAc အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် cFos မှအားဖြည့်-related သည်းခံစိတ်
passive လက်ခံ. တာဟာအားဖြင့်ကိုကင်းကိုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမသက်ဆိုင်ဘဲမူလ passive သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ကံအုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းရန် pharmacological တုံ့ပြန်မှုကိုယ်စားပြုကြောင်း FosB ဗီဇထုတ်ကုန်များ၏စည်းမျဉ်းမတူဘဲ, NAc ငျဒသေအတွက် cFos ၏စည်းမျဉ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆက်စပ်လွှမ်းမိုးမှုခဲ့သည်။ ကိုကင်းထိတွေ့မှု (AY နှင့် CY အုပ်စုများအတွက်စူးရှသို့မဟုတ်နာတာရှည်ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ NAc shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံး cFos ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့် (109-126%) တိုးလာသင်္ဘောသဖန်း။ 5A-B က) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းတာဟာ Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တုန့်ပြန်-ဆက်ပြောပါတယ်ထုံးစံ၌အပျတျောမူသောအခါ, ဤတုံ့ပြန်မှုကို (NAc shell ကိုအတွက် (55% မှ) လျှော့ချခဲ့သည်F4,60 = 9.14, p <0.001) နှင့်သိသိသာသာ NAc core ကိုအတွက် cFos တိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက် (F4,57 = 5.92, p <0.001) ။ CPu တွင်ကိုကင်းမှသွေးဆောင်သော cFos များအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုသည်တာရှည်သော passive (သို့) volitional ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။သင်္ဘောသဖန်း။ 5C), နှင့် AY တိရိစ္ဆာန်များ (164%) အတွက် cFos သော induction (CY နှင့် CSA အုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် () 45-57% အထိလျှော့ချခဲ့သည်F4,67 = 13.29, p <0.001), အားလုံး3striatal subregions အတွက် FosB ပရိုတိန်း၏ induction အတွက်သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်ကိုကင်း - သွေးဆောင် cFos မှအားဖြည့် -related သည်းခံစိတ်အထူးသ striatum ၏ mesolimbic ဒေသများရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သုံးပုံနှစ်ပုံအရွယ်တိုင်းတွင် cFos ပမာဏတိုးခြင်းကိုဆားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သောတိရိစ္ဆာန်များတွင်မတွေ့ရပါ။ ၂၄ နာရီ WD ပြီးနောက်ဆက်လက်မတည်ရှိနိုင်ပါ။
ချက်ချင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးနှင့် 24 ဇ WD မှာ cFos ၏စည်းမျဉ်း။ ခံယူကြောင်းထိန်းချုပ်မှုကြွက် (ထိန်းချုပ်ရေး, ဆားလုပ် SA) တွင်, (CY) acute (AY) သို့မဟုတ်နာတာရှည် passive လက်ခံ. ကိုကင်းကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကြွက်၌၎င်း, ကြွက်များတွင် cFos ၏ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့် (52-58 KDA) ...
striatum ငျဒသေအတွက်ကိုကင်းစားသုံးမှု, cFos နှင့်ΔFosBအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပမာဏတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်များနှင့်၎င်းတို့၏ထမ်းဘိုးကိုမိတ်ဖက်ဖြတ်ပြီးကွဲပြားကတည်းကငါတို့မြင် (မျိုးစုံကို linear ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် cFos ၏ induction နှင့်အတူကင်းစားသုံးမှု၏ပမာဏ, FosB နှင့်ΔFosBပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ဖြည့်စွက်ဇယား 1 အားလုံးအလားအလာဆက်စပ်မှု၏ရလဒ်များကို) သည်။ အဲဒီမှာ passive တာဟာအားဖြင့်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုနှင့် cFos အဆင့်ဆင့်အကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ကြ, ဤဆက်ဆံရေး dorsal နှင့် ventral striatal ငျဒသေမှာရှိတဲ့ကွဲပြားပါတယ်။ အလားတူပေမယ့်အရေးမကြားဆက်ဆံရေးဟာ NAc shell ကို၌တွေ့နေစဉ် NAc core ကို, cFos ၏ induction ခုနှစ်တွင်စူးရှ IV ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး4ဇပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်အပျက်သဘော, ကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ချက်ချင်းပြီးနောက် (သဖန်းသီး။ 6) ။ ဆနျ့ကငျြ, cFos ၏ induction အပြုသဘော CPU ထဲမှာကိုကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ မည်သည့် striatal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် FosB သို့မဟုတ်ΔFosB၏ကင်းစားသုံးမှု (တက်ကြွစွာသို့မဟုတ် passive ဖြစ်စေ) နှင့်ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ သို့သော် NAc shell ကို 24 ဇအတွက် cFos နှင့်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်အကြားခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောဆက်စပ်မှု (ကိုကင်းပြီးနောက်ရှိသောကုသိုလ်ကံ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတဆင့်ကိုကင်းကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များ၌ရှိ၏သဖန်းသီး။ 7), နှင့်ခြုံငုံ cFos အဆင့်ဆင့် 24 ဇ WD မှာပြောင်းလဲမဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း။ အလားတူခေတ်ရေစီးကြောင်း (p <0.07) cFos နှင့် osFosB ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အကြားအပြုသဘောဆက်စပ်များအတွက် NAc core ကိုအတွက်ကိုကင်း Self- အုပ်ချုပ်မှု၏4ဇပြီးနောက်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုကင်းလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ CPu (AY အုပ်စုတစ်စု) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စူးရှသောကိုကင်းပြီးနောက်ကင်းစားသုံးမှုနှင့် cFos immunoreactivity အကြားဒေသကြီး-တိကျတဲ့ဆက်စပ်မှု (AY) ။ cFos immunoreactivity အတွက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်အဆိုးဟာ NAc core ကို (က) တွင်နောက်ဆုံး session တစ်ခုအတွက်ကိုကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ...
Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc shell ကိုအတွက် cFos နှင့်ΔFosBအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု။ cFos immunoreactivity အတွက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်အပြုသဘောကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက် 24 ဇ WD ပြီးနောက်ΔFosB immunoreactivity ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ NAc shell ကိုအတွက်ΔFosB, FosB နှင့် cFos အဆင့်ဆင့်, NAc core ကိုနှင့် CPU striatal ငျဒသေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်သွေးကြောသွင်းကင်းထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်နာတာရှည် Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများတသမတ်တည်း passive IP ကိုကိုကင်းဆေးထိုးသုံးပြီးΔFosBသာထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်မဟုတ်, စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ပြီ (မျှော်လင့်ချက် et al ။ 1994, Nye et al ။ 1995; Chen က et al ။ 1995). အလားတူပဲကျနော်တို့နာတာရှည် IV ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားလုံး striatal ငျဒသေအတွက်ΔFosBတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရမသက်ဆိုင်ကကုသိုလ်ကံသို့မဟုတ် passive ဖက်ရှင်အတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိ၏, ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အဓိကခြားနားချက်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး NAc core နဲ့ CPU နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ΔFosBပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်လျက်, NAc shell ကိုအတွက်အရေးပါမှုကိုချဉ်းကပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (p <0.1) ။ ဤခြားနားချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်တစ်ခုမှာ (၄) ရက်အတွင်းတစ်နာရီလျှင် (၂၅.၅) မှ ၅၇.၅ မီလီဂရမ်မှတစ်ကီလိုဂရမ်မှကိုကင်းပမာဏကို AY အုပ်စုမှကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုကို AY အုပ်စုမှရရှိသောကြောင့်ကိုကင်းထိတွေ့မှုကြာချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကြာချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် bolus IP ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသော 4-25.5 mg / kg ပမာဏထက်များသောတိရစ္ဆာန်များသည်မျှော်လင့်ချက် et al ။ 1994; Lee က et al ။ 2006) ။ ဤအဆိုးကျိုးများပုံမှန်အားဖြင့် IP ကိုဆေးထိုးပြီးနောက်တစ်နာရီအတွင်းမဆုတ်သော်လည်းအပြင်, ကိုကင်း (အဲဒီ session တလျှောက်လုံးဆက်လက်ရှိကြောင်းကိုကင်းနှင့်အ dopamine မြင့်မားအထွတ်အထိပ်ဦးနှောက်အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုပြီးတိုက်ရိုက် IV လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်Bradberry, 2002) ။ ထို့ကြောင့်ကင်းဖို့တစ်ခုတည်းသောစူးရှသောထိတွေ့မှုအပြီးစုဆောင်းမိဖို့ΔFosBများ၏စွမ်းရည်ကိုပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ကိုကင်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏အစွမ်းသတ္တိ, ကြာချိန်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ဖွယ်ရှိမှီခိုသည်။ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာတော့ΔFosBကင်းဖို့တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့ပြီးနောက်စုပြုံနိုငျသောတွေ့ရှိချက်ΔFosBပိုပြီးလျှင်မြန်စွာယခင်ကဖြစ်နိုင်သည်ကနဦး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမူးရူးကနေရရှိလာတဲ့, ထင်ထက်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာΔFosBစုဆောင်းခြင်းပမာဏကိုနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး၏သင်တန်းကျော် dorsal နှင့် ventral striatal ဒေသများအကြားကွဲပြားပါတယ်။ အဆိုပါ NAc core ကိုခုနှစ်တွင်ΔFosBပမာဏကိုနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေး (0 ဇ WD) ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးအပြီးတွေ့သောပိုပြီးနှစ်ဆထက်ပမာဏဖြစ်ခဲ့သည်, ထို NAc shell ကိုအတွက်သေးငယ်ΔFosBတိုးသာနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိနေပြီချက်ချင်းပြီးနောက်တွေ့ရှိရ , မခွဲခြားဘဲကင်း passive ထမ်းဘိုးကိုပြုတ်ရည်များကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်ရှိမရှိ၏။ သူတို့ကနောက်ဆုံးထိတွေ့ပြီးနောက်မှာအနည်းဆုံး 24 နာရီဆက်ရှိနေကတည်းကနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတိုးဖြစ်ကောင်းအလွန်အမင်းတည်ငြိမ်ΔFosBပရိုတိန်းများစုစည်းနေခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, CPU အတွက်ΔFosB၏ပမာဏအတွက်ကြီးမားသောတိုးအလားအလာကဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌စူးရှသောထိတွေ့မှုကနေထုတ်လုပ်တာမျက်နှာကြက်ထင်ဟပ်စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူထူးခြားမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ သို့သျောလညျးကိုပင် CPU ထဲမှာဖွယ်ရှိဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့မှလှူဒါန်းခဲ့ΔFosBပရိုတိန်းများစုစည်းနေခြင်းနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူအားလုံး3ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ΔFosBအဘို့ကိုကင်း-သွေးဆောင် mRNA မှတီထွင်သိသိသာသာသည်းခံစိတ်ကတည်းကနာတာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
IV ကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် FosB ပရိုတင်းပမာဏအပြည့်အစုံကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး CPc နှင့် NAc shell တွင် NAc core ထက်ပိုမိုများပြားသည်။ သို့သော် FosB အတွက် mRNA သည် NAc shell တွင် ၁၀ ဆနီးပါးနှင့် CPu နှင့် NAc core တွင် ၅ ဆထက်နည်းသောကြောင့်သွေးဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သိသိသာသာသည်းခံမှုသည်ကိုကင်း၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အတူ FosB အတွက် mRNA နှင့်ပရိုတင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုသွေးဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ FosB ပရိုတိန်း၏အနိမ့်ဆုံးသော induction သည် AP-10 နှင့်သက်ဆိုင်သောမိတ်ဖက်များအတွက် osFosB နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ အမ်ဖက်တမင်းကိုအသုံးပြုသည့်ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အညီ osFosB ကိုပိုမိုထိရောက်စွာသောကြောင့် FosB / osFosB mRNA ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အချိုးကိုလည်းစူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်လျှော့ချခဲ့သည် (Alibhai et al ။ 2007) ။ ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးကုသမှုနှင့်အတူယခင်တွေ့ရှိချက်မတူဘဲစူးရှသောကိုကင်းများက FosB / ΔFosB mRNA ၏ဆွေမျိုးအချိုးအတွက်လျော့ချရေး FosB ထက်ΔFosB၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ကျန်နေတဲ့သော induction ထင်ဟပ်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကျန်ရစ်၏။
ΔFosBအဆင့်ဆင့်လူ့သွေးကြောသွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပိုမိုပုံမှန်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံများနှင့်ကြာချိန်ကို အသုံးပြု. ပင်စူးရှသောကိုကင်းပြီးနောက်တိုးမြှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်းစွဲလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လုံလောက်သောဆေးများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်လျှင်ထို့ကြောင့်ΔFosBကနဦးကင်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအေပီ-1 binding လှုပ်ရှားမှုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ΔFosBΔFosBသိသိသာသာလျှော့ချ cFos နှင့် FosB နှင့်အတူခြီးမွှောကျသောအခါနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုကနေကွဲပြားကြောင်းမြစ်အောက်ပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့် neuroplasticity မှဦးဆောင် AP-1 binding လှုပ်ရှားမှုအတွက် FosB နှင့် cFos နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကွောငျ့အΔFosBကြောင့် ventral striatum အတွက်နှစ်ဦးစလုံး သာ. ကြီးမြတ်စုဆောင်းခြင်းမှနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် သာ. ကြီးမြတ်သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် dorsal နှင့် ventral striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက် AP-1 binding မိတ်ဖက်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။ Over-စကားရပ်ΔFosB၏ striatal-တိကျတဲ့ကင်းများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါးကြောင်းပေးထားသော (Colby et al ။ 2003), ကနဦးကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူΔFosB၏ထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်စွာစုဆောင်းခြင်းဟာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အလွန်အစောပိုင်းအဆင့်အတွက်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုရှည်နိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်စူးရှသောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ striatum တစ်လျှောက်လုံးယင်းသို့ထင်ရှားတဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်ΔFosBစကားရပ် (dorsal striatal ဆားကစ်၏အစောပိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှတဆင့် compulsive အလေ့အထများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မယ့်ထုံးစံ၌ AP-1 binding လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့ဘီးလင်းနှင့် Everitt, 2008).
အဆိုပါΔFosB isoforms ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ΔFosBအဆင့်ဆင့် (သိသိသာသာနာတာရှည်သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကို အသုံးပြု. ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, နောက်ဆုံးသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုပြီးနောက် 24 နာရီမွှငျ့တငျကနျြရPich et al ။ 1997; Perotti et al ။ 2008) ။ အိုင်ပီကိုကင်းဆေးထိုး၏ passive စမ်းသပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအသုံးပြုပြီးတခြားလေ့လာမှု (ΔFosBစုဆောင်းခြင်းဆုတ်ခွာ၏ 1-2 ပတ်ဆက်လက်ရှိနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရမျှော်လင့်ချက် et al ။ 1994; Brenhouse နှင့်ကြယ်, 2006; Lee က et al ။ 2006ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက် ၃ ပတ်အကြာတွင်ဤပြောင်းလဲမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရပါ။ အတူတူ, ဒီလေ့လာမှုများ osFosB စုဆောင်းခြင်းအတော်လေးတိုတောင်းသောဆုတ်ခွာကာလ (<3 ပတ်) အဘို့အဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုပေမယ့်တိုက်ရိုက်ကြာရှည်ဆုတ်ခွာအတွက် relapse များအတွက်ပိုမိုကြီးမား propensity ကိုအထောက်အကူမပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် osFosB immunoreactivity ကို D3 receptor ပါဝင်သည့် striatal neuron များ၌ကြွက်များအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းမှထုတ်ယူပြီးနောက် (၃၀) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။Lee က et al ။ 2006) ။ ထိုသို့သောဆဲလ်-တိကျတဲ့နမူနာပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုမြေတပြင်လုံးတစ်ရှူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထက်ကျန်နေတဲ့ΔFosBစုဆောင်းခြင်းကိုပိုမိုထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းΔFosBအပြောင်းအလဲများကိုမျှသာကြွက်များထက်ကြွက်တွေမှာကြာကြာဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဒါဟာအစΔFosBထိုကဲ့သို့သော D1 ပါဝင်သော striatal အာရုံခံ (ထဲမှာ dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်းအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ morphological အပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင်မှတ်တမ်းဖြစ်ရပ်များ၏အဆငျ့ဆငျ့ကို induces ကြောင့်ဖြစ်နိုင်Lee က et al ။ 2006; ဝင်္ကပါ et al ။ 2010) ။ ဤကိစ်စတှငျ, (Cdk5 နှင့်NFκBအပါအဝင်အများအပြားΔFosBပစ်မှတ်နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက်တိုးမြှင့်နေကြသည်, ဤအချက်များနျူကလိယတွင် neuron ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် / သို့မဟုတ် function ကိုပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် circuitry accumbens ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းငှါအန်း et al ။ 2001; Benavides နှင့် Bibb, 2004; Nestler, 2008) ။ ထို့ကြောင့်ကဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းΔFosBစုဆောင်းခြင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြောင်းဖြစ်နိုင်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေသို့မဟုတ် -seeking အပြုအမူအပေါ်ကြာရှည်သက်ရောက်မှုများအတွက်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစားပိုပြီးဖို့အကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းမျိုးစုံဆယ်လူလာဖြစ်စဉ်များကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင်း "မော်လီကျူး switch ကို" ကိုကိုယ်စားပြုနိုင် စွဲဇီဝပြည်နယ်များ (Nestler et al ။ 2001).
Tသူကလက်ရှိလေ့လာမှုကိုကင်း-mediated ΔFosBစုဆောင်းခြင်းအလွဲသုံးစားမှု immunohistochemical လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အမျိုးစုံမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းစားသုံးမှု၏ကုသိုလ်ကံထိန်းချုပ်မှုတို့ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမပေးကြောင်းတွေ့ရှိရ (Perotti et al ။ 2008; Pich et al ။ 1997) ။ ဤသည်ΔFosBနှင့် FosB အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုးဖွယ်ရှိကင်းဖို့ pharmacological တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ် monoaminergic အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏အခြားမြစ်အောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ΔFosBမတူဘဲ, ကျနော်တို့ကိုကင်း-သွေးဆောင် cFos မှသည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိသိသာသာအဆိုပါ NAc အတွက်, ဒါပေမယ့်မ CPU ထဲမှာကိုကင်းစားသုံးမှုကျော်ကုသိုလ်ကံထိန်းချုပ်မှုကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် NAc အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် cFos မှသည်းခံစိတ်စူးရှသောထမ်းပိုးပြုတ်ရည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာနာတာရှည်ထမ်းဘိုးကိုပြုတ်ရည်များကလတ်တလောတွင်ကင်းလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့ပျက်ကွက်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ passive IP ကိုဆေးထိုးပေးထားကြသောအခါဤအတွေ့ရှိချက် (သည်းခံစိတ်၏မြောက်မြားစွာအစီရင်ခံစာများကနေ NAc အတွက် psychostimulant-သွေးဆောင် cFos မှသိသိသာသာကွာခြားမျှော်လင့်ချက် et al ။ 1994; Nye et al ။ 1995; Chen က et al ။ 1995, 1997; Alibhai et al ။ 2007) ။ ကိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက် cFos မှသည်းခံစိတ်အထပ်ထပ် IP ကိုထိုးနှင့်အတူအများအပြားလေ့လာမှုများမှုနဲ့အပြိုင်အကြောင်း, နာတာရှည်သွေးကြောသွင်း လက်ခံ. အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူသည်းခံစိတ်မရှိခြင်း (မျိုးစုံနှင့်ခန့်မှန်းရခက် လက်ခံ. ကင်းထိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပေးထားGoeders 1997) ။ ventral အတွက်သည်းခံစိတ်ထက် dorsal striatum ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် limbic ဆားကစ်ပေါ်မှာရွေးချယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။ cFos ၏ induction မှသည်းခံစိတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တယျစဉ်များအပြင်, ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုပြီးနောက် NAc shell ကိုအတွက် cFos ပရိုတိန်းတစ်ခုသိသိသာသာ ~50% တိုးနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အဲဒီမှာကနျြရစျ (p <0.1) cFos တိုးဘို့လည်းအဓိကအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထက်ပါဆွေးနွေးချက်များအရ ၄ င်းကွာဟမှုသည်အကြောင်းရင်းများသည် IP ဆေးထိုးခြင်းနှင့် IV အရံသွင်းခြင်းအကြားတွင်ကွဲပြားမှုများကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ နာတာရှည်ကိုကာကိုလာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနောက်တွင် NAc တွင် cFos ၏ကျန်ရှိသောသောထပ်မံထည့်သွင်းမှုများသည် cFos, osFosB နှင့် FosB များပါ ၀ င်သည့် AP-4 ရှုပ်ထွေးသောအရာများသည်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုအပြီးတွင်စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အခန်းကဏ္ofကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်တွန်းအားပေးသောဝတ္ထုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
cFos (dorsal striatum အတွက်ΔFosBစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချ-တိုက်ရိုက်ကြောင်းမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားပေးထားRenthal et al ။ 2008), က CPU အတွက်ကင်း-သွေးဆောင် cFos စူးရှသောကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူΔFosBအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် paralleled ခဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေနာတာရှည်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းပြီးနောက်ယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်4ဇနောက်ဆက်တွဲကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ cFos ၏ induction impedes နေစဉ်စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူΔFosB၏စုဆောင်းခြင်း, cFos သော induction ကိုထိခိုက်ဖို့သိပ်နောက်ကျသည့် 24 ဇ session တစ်ခုထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကစိတ်ကူးစူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (0.067 ဇ WD) နှင့်အတူ CPU အတွက် cFos နှင့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အကြားအလယ်အလတ်အပြုသဘောဆက်စပ်မှုတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ် (p = 0) နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ ဒါဟာအယူအဆကိုလည်းစူးရှသောထမ်းပိုးတိရိစ္ဆာန်များ၏ CPU အတွက် cFos သော induction နှင့်ကိုကင်းစားသုံးမှုအကြားခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောဆက်စပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ΔFosBဆင်တူသည် cFos တုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကွောငျးကိုကင်း၏ဆေးထိုးရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် NAc အတွက်နာတာရှည်နှင့်အတူΔFosB၏ သာ. စုဆောင်းခြင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် cFos တုံ့ပြန်မှုအတွက်သည်းခံစိတ်မရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်မနိုင်ထမ်းပိုး။ cFos သော induction မှသည်းခံစိတ် Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထငျရှားခဲ့ပေမယ့်ထိုမှတပါး, 24 ဇဆုတ်ခွာပြီးနောက် NAc shell ကိုအတွက်ကျန်နေတဲ့ cFos နှင့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အကြားခိုင်မာတဲ့အပြုသဘောဆက်စပ်မှုဟာ ventral striatum အတွက် cFos နှင့်ΔFosBအကြားတစ်ဦးကအနုတ်အပြန်အလှန်ကူညီပံ့ပိုးမထားဘူး။ အဆိုပါ CPU ဒေတာကနေနောက်ထပ်ကွာခြားချက် NAc core ကိုအတွက် cFos အပျက်သဘောထက်အပြုသဘောချက်ချင်း ventral striatum အတွက်ပိုမိုမြင့်မားထိုးထိတွေ့မှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွင်း-session တစ်ခု tachyphylaxis ထင်ဟပ်နိုင်သည့်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး, ပြီးနောက်ကိုကင်းစားသုံးမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက် cFos, FosB နှင့်ΔFosBစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်သွေးကြောသွင်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကွဲပြားဒေသဆိုင်ရာပုံစံများကိုခံယူသော။ ညွှန်ပြ ဤရွေ့ကားစကားရပ်ပုံစံများမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုများ၏ကြာချိန်နှင့်ငွေပမာဏကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ထူးခြားမှီခိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကင်း-သွေးဆောင် cFos မှသည်းခံစိတ်ကုသိုလ်ကံကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။ ရလဒ်ကိုလည်းΔFosBΔFosBစုဆောင်းခြင်းတိုးမြှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအစောပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးကြီးသောဖြစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းစိတ်ကူး supporting, သွေးကြောသွင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လူတန်းစားနှင့်နာတာရှည်နှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူစုပြုံနိုင်သည်ကိုပြသပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ကΔFosBသွယ်ဝိုက်ကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစောပိုင်းရုပ်သိမ်းကာလအတွင်းမှာဗီဇစကားရပ်အပေါ်အတော်လေးရေတိုရေရှည်လွှမ်းမိုးမှုကနေတဆင့်ဆုတ်ခွာအတွက်မြဲမူးယစ်ဆေးတဏှာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောမြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်နှင့်အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် / သို့မဟုတ် function ကိုအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့အားထုတ်မှုနောက်ဆုံးမှာစွဲလမ်းအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်ΔFosBနှင့်အခြား Fos-related antigen ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
Supp စားပွဲတင် S1
linear Regress ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ယေဘုယျဆက်စပ်မှုရလဒ်များကိုနောက်ဆက်တွဲဇယား 1. ။ ဘယ်ဘက်အပြားသုံးခုတွင်ကိုကင်းစားသုံးမှုနှင့်အဆင့်မြင့် cFos (ထိပ် panel)၊ FosB (အလယ်ဘောင်) သို့မဟုတ်ΔFosB (အနိမ့် panel) ၏အကြားဆက်စပ်မှုများပါရှိသည်။ ညာဘက်သုံးပြားတွင် cFos နှင့် osFosB (top panel)၊ cFos နှင့် FosB (အလယ်ဘောင်)၊ FosB နှင့် osFosB (အနိမ့် panel) အကြားဆက်စပ်မှုများပါရှိသည်။ ဦး နှောက်ဒေသများနှင့် WD အချိန်အချက်များသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာ r- နှင့် p-values ​​နှင့်အတူပြသထားသည်။ * p <0.05, T0.1> p> 0.05 ။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီအလုပ်နှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဋိပက္ခများကိုကြေညာ။ ဤလုပ်ငန်းကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ DA 10460 နှင့် DA 08227 ကထောက်ခံနှင့်ဇီဝဆေးပညာသုတေသနအတွက်ယ်စလီ Gilliland ပါမောက္ခအားဖြင့်ခံခဲ့ရသည်။
Alibhai IN, အစိမ်းရောင်က TA, Potashkin ဂျာ Nestler EJ ။ ၏စည်းမျဉ်း fosB နှင့် ΔfosB mRNA စကားရပ်: Vivo ခုနှစ်တွင်နှင့်စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 1143: 22-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အန်းအီး, Chen က J ကို, Zagouras P ကို, မဂ္ဂနာ H ကို, ဟော်လန် J ကို, Schaeffer အီး, Nestler EJ ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-κB၏ induction ။ J ကို Neurochem ။ 2001; 79: 221-224 ။ [PubMed]
Bachtell RK, Choi KH, Simmons DL, စွန်ငှက်အီး, Monteggia LM, Neve ln, ကိုယ်ပိုင် DW ။ နျူကလိယအတွက် GluR1 စကားရပ်၏အခန်းက္ပကိုကင်းထိခိုက်စေကင်း-ရှာအပြုအမူအတွက်အာရုံခံ accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 27: 2229-2240 ။ [PubMed]
ဘီးလင်း: D, Everitt BJ ။ အလေ့အထများကိုရှာကြံကင်းသည့် dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 432-441 ။ [PubMed]
Benavides DR, Bibb ဂျေအေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် plasticity အတွက် Cdk5 ၏အခန်းက္ပ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2004; 1025: 335-344 ။ [PubMed]
ဗင်္ရက်ရှာဟာအို Ahmed က SH, Koob gf, Ettenberg အေထိန်းချုပ်ထားရာမှ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်းအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2004; 995: 46-54 ။ [PubMed]
Bradberry CW ။ ကိုကင်းများ၏စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်လုပ်ရပ်များအတွက် extracellular dopamine ၏ Dynamics ကို။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2002; 8: 315-322 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, ကြယ် JR ။ က c-Fos နှင့်ΔFosB differential ကိုကင်း-sensitized ကြွက်များတွင် shell ကို accumbens သည့်နျူကလိယ၏ကွဲပြားငျဒသေထဲမှာပြောင်းလဲနေကြသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2006; 137: 773-780 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nestler EJ ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသခွငျးအားဖွငျ့ΔFosBနှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995; 48: 880-889 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ ။ နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်ΔFosB၏တည်ငြိမ်မျိုးကွဲ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 4933-4941 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosB၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2488-2493 ။ [PubMed]
Edwards က S နဲ့, Whisler KN, Fuller, DC, Orsulak PJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ : D ထဲမှာစွဲ-related ပွောငျးလဲ1 နဲ့ D2 နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ dopamine အဲဒီ receptor အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharm ။ 2007a; 32: 354-366 ။ [PubMed]
Edwards က S နဲ့, ဂရေဟမ် DL, Bachtell RK, ကိုယ်ပိုင် DW ။ နာတာရှည် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါကင်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Camp-မှီခိုပရိုတိန်း phosphorylation မှတိုင်းဒေသကြီး-တိကျတဲ့သည်းခံစိတ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007b; 25: 2201-2213 ။ [PubMed]
Goeders NE ။ ကိုကင်းအားဖြည့်အတွက်တစ်ဦးက neuroendocrine အခန်းကဏ္ဍ။ Psychoneuroendocrinol ။ 1997; 22: 237-259 ။ [PubMed]
Graybiel လေး, Moratalla R ကို, Robertson က HA ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်ကိုကင်း striosome-matrix ကိုအခန်းနှင့် striatum ၏ limbic subdivisions အတွက်က c-fos ဗီဇ၏မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့ activation သွေးဆောင်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1990; 87: 6912-6916 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂရေဟမ် DL, Edwards က S နဲ့, Bachtell RK, DiLeone RJ, Rios M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူနျူကလိယ accumbens အတွက် dynamic BDNF လှုပ်ရှားမှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse တိုးပွားစေပါသည်။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1029-1037 ။ [PubMed]
B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1992; 89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, Duman RS, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-1244 ။ [PubMed]
BT မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုကင်းနှင့် AP-1 ကူးယူအချက်ရှုပ်ထွေး။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1998; 844: 1-6 ။ [PubMed]
Jorissen HJMM, Ulery PG, ဟင်နရီ L ကို, Gourneni S က, Nestler EJ, Rudenko G. အ Dimerization နှင့်ကူးယူအချက်ΔFosB၏ DNA ကို-binding ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဇီဝဓါတုဗေဒ။ 2007; 46: 8360-8372 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက်ΔFosB၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
Kufahl PR စနစ်, Zavala AR, Singh ကတစ်ဦး, သီရဲလ် KJ, Dickey ED, Joyce ဖြစ်မှု, Neisewander JL ။ တုန့်ပြန်-ဆက်ပြောပါတယ်အေးစက်တွေကိုအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement နှင့်ဆက်စပ်က c-Fos စကားရပ်။ synapses ။ 2009; 63: 823-835 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lee ကငွေကျပ်ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, D1 အတွက် Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့် D2 dopamine နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ receptor-်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝင်္ငါ Covington သူ, III ကို, Dietz DM, LaPlant မေး, Renthal W က, Russo SJ, စက်ပြင် M က, Mouzon အီး, Neve RL, Haggarty SJ, Ren YH, Sampath SC, Hurd YL, Greengard P ကို, Tarakovsky တစ်ဦးက, Schaefer တစ်ဦးက, Nestler EJ ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010; 327: 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
Neisewander JL, Baker DA, Fuchs RA, Tran-ငုယင် LTL, Palmer ကတစ်ဦး, မာရှယ် JF ။ Fos ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 798-805 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ ΔFosB: စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီးလ်ဖြတ်ကျော် R ကို Soc ခ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို, Duman RS, Nestler EJ ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာΔFosB၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, et al ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBသော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008; 62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Paxinos, G, Watson ဟာ GC ။ stereotaxic သြဒီနိတ်ထဲမှာကြွက်ဦးနှောက်။ 4th ။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
Pich EM, Pagliusi SR, Tessari M က, Talabot-Ayer: D, ဗန် Huijsduijnen RH အ, Chiamulera C. နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အဖြစ်များသည့်အာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 83-86 ။ [PubMed]
Renthal W က, Carl TL, ဝင်္ငါ et al ။ ΔFosB၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates က c-fos နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်ဗီဇ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7344-7349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသဘာဝဆုလာဘ်-related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ 2008; 28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Young က ST, Porrino LJ, Iadarola MJ ။ ကိုကင်း dopaminergic: D ကနေတဆင့် striatal က c-Fos-immunoreactive ပရိုတိန်း induces1 receptors ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1991; 88: 1291-1295 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zhang က J ကို, Zhang က L ကို, ကွန်ဖူး H ကို, Zhang ကမေး, Zhang က D:, အဘိဓါန် Lou: D, Katz JL, Xu အမ်က c-Fos ကင်း-သွေးဆောင်မြဲပြောင်းလဲမှုများဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 13287-13296 ။ [PubMed]